Izikhangibavakashi Nemisebenzi eNdiya | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | India, Ukuzilibazisa, Ukuhamba kwe-Asia
Uma ufuna ukuya eNdiya lapho-ke ungahle uhlele uhambo lwakho isikhathi eside, kuyinto ejwayelekile. Ukuhambela e-India kuthatha isikhathi eside ukujabulela konke okunikezayo, uhambo lwezinsuku ezimbalwa nje lungaba mfushane kakhulu. Yini enye, Uma ufuna ukuya eNdiya kufanele futhi wazi kahle ukuthi ufuna ukuhlala kuphi nesabelomali onaso. ENdiya kunezintengo zazo zonke izinhlobo, kepha ngokuya ngamanani ungaba nokunethezeka okuncane noma okuncane, lokhu kuzoncika ekuthandweni kwakho komuntu siqu.
Kepha ngaphezu kokubheka konke lokhu ngenkathi uhambela eNdiya, Uzophinde ufune ukwazi ukuthi yini okukhangayo nemisebenzi yabo ethandwa kakhulu ukuze uhlele kangcono uhambo lwakho. Namuhla ngifuna ukukhuluma nawe ngezinye zezinto ezikhangayo ezibaluleke kakhulu nemisebenzi eNdiya ukuze ukwazi ukunquma kangcono uhambo lwakho.
ENdiya ungaba nokuheha okuningi nemisebenzi ongayenza, ngaphezu kokuvakashela izindawo ezinhle ukujabulela iholide noma uhambo oluhle kakhulu.
1 Idolobha laseDelhi
2 Ukuvakashela indawo enhle yamaTaj Mahal mausoleum
3 Amapaki aseNdiya
4 Ugwadule Olukhulu LweNdiya
5 Izindawo ezingcwele
6 Imisebenzi yokuzijabulisa
INew Delhi ihlukaniswe izingxenye ezimbili, i-Old Delhi ne-Modern noma i-New Delhi. Lesi sakamuva yidolobha lesimanje elinemisebenzi eminingi okufanele yenziwe kanye nezingqinamba zesimanje ezizokuthathela umoya. I-Old Delhi inemigwaqo emincane namathempeli amahle, akungabazeki ukuthi kunezivakashi eziningi ezikhetha ukulahleka ku-Dehli yasendulo. Ngeke ukwazi ukuphuthelwa iRed Fort noJama Masjid, I-mosque enkulu kunazo zonke e-India, awukwazi ukuphuthelwa i-Outab Minar Tower enhle kakhulu.
Uma ufuna ukubona isithombe esimangalisayo Ngeke ukwazi ukukhohlwa ukuvakashelwa eGolden Triangle. IGolden Triangle itholakala kulayini odwetshiwe phakathi kweDelhi, i-Agra neJaipur. . Ekhoneni eliseningizimu lonxantathu kukhona u-Agra, owaziwa ngeTaj Mahal. Ekhoneni eliseningizimu-ntshonalanga kukhona iJaipur eRajasthan, ikhaya le-Amber Palace kanye nePalace of Winds.
Ukuvakashela indawo enhle yamaTaj Mahal mausoleum
ITaj Mahaj e-Agra yaziwa umhlaba wonke futhi iyi-mausoleum emhlophe enkulu leyo lakhiwa phakathi kuka-1632 no-1653 ngomyalo we-Mogo Emperor Shan Jahan ngokukhumbula unkosikazi wakhe amthandayo. ITaj Mahal ibizwa nangokuthi: "izinyembezi esihlathini saphakade" futhi ingenye yobuciko bokwakhiwa kukaMughal futhi ingesinye sezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu eNdiya.
Futhi, idome emhlophe yeTaj Mahal kuyimabula yamabula futhi ngifaka nezinye izakhiwo ezinhle, imizimba yamanzi, izingadi eziningi zokuhlobisa ezinezihlahla, izimbali nezihlahlana ezinhle. Kuyinto enhle ukuthi uma uyibona kumuntu wokuqala ngeke ikwazi ukukushiya ungenandaba.
I-India inamapaki kazwelonke angaphansi kuka-70 kanti ingxenye yayo inezinqolobane ezingama-24 nezindawo zokulondolozwa kwezilwane ezingama-400 ezweni.. Ukuze ube nesikhathi sokuwavakashela wonke, uzodinga izinyanga ezimbalwa zeholide ... ngakho-ke umqondo owodwa ukuthi ubheka imininingwane ngakunye futhi ngaleyo ndlela ungakhetha leyo ofuna ukuya kuyo kakhulu noma leyo esiseduzane nendawo lapho uzohlala khona.
Ingwe yaseNdiya neNdlovu yase-Asia zigcwele isifunda sonke, kepha uma ufuna ukwazi indawo yemvelo edume kakhulu futhi ufuna ukuyivakashela ukuze ukwazi ukuthandana nakho konke ekuhlinzekayo, ungaphuthelwa I-Rajasthan's Bharatpur National Park neBengal Sundarban National Park.
Ugwadule Olukhulu LweNdiya
ENyakatho-mpumalanga yeNdiya ungathola iGwadule Elikhulu elaziwa nangokuthi iThar. Lolu hlane luhlanganisa indawo engamakhilomitha angama-804 ubude namakhilomitha angama-402 ububanzi. Cishe akukho lutho! Kunamadolobha kulo lonke leli hlane njengamadolobha asogwadule aseRajhasthan futhi uma uwavakashela, uzothola ukuthi ayamangalisa ngendlela emangalisayo. Amadolobha adume kakhulu ukuwavakashela yiJaisalmer ngenxa yoMkhosi Wogwadule obanjwa ezinyangeni zikaJanuwari noFebhuwari noma idolobha lasePushkar lapho kubanjelwa khona iCamel Fair ngoNovemba.
Ngaphezu kwakho konke lokhu, ungathola futhi izinqaba, izigodlo namathempeli abaluleke kakhulu ngokomlando nangokwakhiwa.. Kepha uma ufuna ukuvakashela uRajhasthan ngeke ukwazi ukukhohlwa i-Udaipur, indawo enhle ongaya kuyo nomlingani wakho ngoba inothando kakhulu. Cabanga nje uma kuthandana kakhulu ukuthi kunabantu ababiza le ndawo ngokuthi "iVenice yaseMpumalanga". Idolobha lakhiwe ngaseLake Pichola kanti iLake Palace iyindawo lapho ungahlala khona ukwazi ukubekezelela impilo yasehlane (sibonga ichibi).
Mhlawumbe uyazi ukuthi i-India ingenye yezindawo ezinenkolo kakhulu futhi yingakho ungeke ukwazi ukuphuthelwa ezinye zezindawo zayo ezingcwele, noma kunezinkolo eziningi ezahlukahlukene ezihlangana. Abantu bayazihlonipha izinkolelo zomunye nomunye, beyisibonelo esihle sokubekezelela inkolo yabo bonke.
Inkolo evelele eNdiya ngamaHindu futhi kungashiwo nokuthi ingenye yezinkolo ezindala kakhulu emhlabeni. Uhlelo lweHindu caste lubamba iqhaza elibalulekile empilweni nasemphakathini wabantu baseNdiya. Enye yezindawo ezibaluleke kakhulu okufanele ungaphuthelwa yithuba lokuvakashela yiVaranasi, okuyisikhungo senkolo samaHindu futhi esinezindlu zezihambeli ezingekho ngaphansi kwezinkulungwane nezinkulungwane ngonyaka.
Kufanele futhi uvakashele iPuri ogwini lweBay of Bengal engesinye sezikhungo ezinkulu kakhulu zokuhambela eNdiya futhi aziwa kakhulu ngenxa yethempeli laseJagannat.
Ngaphezu kwalokho, kulo lonke elaseNdiya kukhona nezindawo okungezakho ezinye izinkolo ezifana nobuBuddha, ubuSikh, nobuKrestu.
Kepha uma ngaphezu kokwazi ubungcweti, abantu bayo, amathempeli kanye nokunye okude, kufanele wazi futhi ukuthi eNdiya kunezindawo ezihambisana nemidlalo ye-adventure ukuze ube neholide igcwele isenzo ne-adrenaline.
Ungathola izintaba zokushushuluza ebusika, imifula nezimpophoma zokuzijwayeza imidlalo eyingozi yamanzi, ugu lwamabhishi, amahlathi angakholeki ... ENdiya ungenza isikali, ukushushuluza, ukuhamba izintaba, ukugijima, amanzi nezemidlalo eziyingozi, igalofu ... kuzodingeka ukhethe indawo nomsebenzi ofuna ukuwenza kuphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » Izikhangibavakashi Nemisebenzi eNdiya
Amapaki wezindikimba ezinhlanu njengesipho sokuqala seSidlo